Maamulayaal ka hadlay horyaalka - BBC News Somali
Maamulayaal ka hadlay horyaalka
3 Maarso 2016
Maamulaha Arsenal, Arsene Wenger, ayaa walaac ka muujiyay natiijooyinka ugu dambeeyay ee kooxdiisa, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inay dib ugu noqdaan qaabkii aasaasiga ah ee ku saabsanaa sida loo badiyo kaddib markii ay kooxda Swansea 2-1 uga adkaatay.
Maamulaha Tottenham Mauricio Pochettino, waxaa uu isagu sheegay inuusan eedda saareyn kooxdiisa oo horyaalka u tartamaysa inay caraysnayd markii ay 1-0 uga badisay West Ham.
Maamulaha Manchester City-na, Manuel Pellegrini, waxaa uu sheegay inuusan ka fekerayn in kooxdiisu horyaalka qaaddo kaddib markii uu arkay ciyaartii ay 3-0 ku garaacday Liverpool oo garoonkeeda lagu dheelayay.
Waxaas oo dhan waxaa macnaheedu yahay in Leicester ay weli horyaalka ugu sarreyso, iyadoo 10 ciyaarood oo keliya ay harsan yihiin.
Leicester waxay leedahay 57, iyagoo hoggaankooda sku sii adkaystay kulammadii ugu dambeeyay Talaadadiina 2-2 barbardhac ah ay ku kala baxeen West Brom.
Tottenham waxay noqon doontaa kooxda ugu sarreysa hoggaanka horyaalka haddii ay caawa ka badiso West Ham.
Barbardhicii Leicester ay la gashay West Brom Talaadadii waxaa macnaheedu yahay Tottenham oo saddex dhibcood ka dambeysa Leicester inay kaalinta koowaad ku geli karto gool tirsi.
Tottenham oo aan horyaalka ku guulaysan muddo 55 sano ah, waxaa hoggaanka kala horreynta kooxaha ugu dambaysay 1964, waagaas oo ugu dambaystii ay galeen kaalinta 4aad.
Wixii waqtigaas ka dambeeyay waxay shan jeer ku dhammaysteen kaalinta 3aad.
Kooxda Mauricio Pochettino waxay guulaysteen lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyay tartanka horyaalka Ingiriiska, taas oo ka soo bilaabatay wixii ka dambeeyay 1-0 ay Leicester uga badisay bishii January.